Kunobva kunoona kuti iyo iPhone 7 bhatiri ichave 1960mAh | IPhone nhau
Kana tichitaura nezve izvo zvinotsanangurwa nefoni mbozha, tinogona kutaura nezve 100Mpx kamera mu3D, 64-musimboti processor, 128GB ye RAM kana mbiya yemukaka ine chibage mangwanani, asi tinodawo kuti zvese izvi zvaive ichiperekedzwa ne superbattery iyo yaizobata zvakafanana nhare mbozha neingi inki yekutanga kwezana ramakore Mune ino pfungwa yekupedzisira, OnLeaks inotipa yakanaka nhau: iyo Iyo bhatiri yeiyo iPhone 7 ichavandudza iyo yeiyo iPhone 6s.
Muparidzi wechiFrench anodudza masosi akavimbika "kwete 100%, asi anenge" uyo akamuudza kuti bhatiri reiyo iPhone 7 raizove 1960mAh, iyo ingave iri 14.2% yakakwira kupfuura bhatiri reiyo iPhone 6s, iyo Steve pachake anga achitarisira kutiyeuchidza kuti iri 1715mAh. Izvi zvingave zvichikwanisika kunyangwe hazvo iyo inotevera apple smartphone uye yazvino modhi ichagovana yakakura chikamu chemayera, kana asiri ese.
Iyo iPhone 7 bhatiri ichawedzera kubva 1715mAh kusvika 1960mAh
Akanaka kuvimbika (kwete 100% asi ndoda…) sosi yakandiudza #iPhone7 bhatiri = 1960mAh (# iPhone6s = 1715mAh)
Chaizvoizvo sosi (kwete 100% asi ingangoita…) yakandiudza kuti bhatiri reiyo # iPhone7 = 1960mAh (# iPhone6s = 1715mAh)
Asi, tichawana kuzvitonga kuzhinji nekuwedzera ikoko? Pamwe hazvisi zvakawanda, asi masvomhu anotiudza kuti, mukufunga, kana iyo iPhone 6s ichitora maawa gumi ekushandisa, semuenzaniso, iyo iPhone 10 inofanirwa kugara ingangoita 7:11 maawa. Asi isuwo tinofanira kudaro funga nezve A10 iyo, kufanana neA9, ichave inoshanda zvakanyanya kupfuura processor inosanganisirwa mune yapfuura modhi. Muchokwadi, shamwari yeA9, iyo M9 co-processor, inobvumira iyo iPhone 6s kuti igare ichiteerera yakamirira isu kukumbira Siri pasina kukanganisa kuzvitonga. Uye zvakare, neIOS 10 tinogona kumutsa iyo iPhone nekuingoisimudza kubva patafura.
Semazuva ese, isu tichafanirwa kuramba takamirira, ino nguva yekuti ruzivo rwusimbiswe uye, kana zvikadaro, tarisa kana kuzvitonga kuri nani zvakanyanya kana kwete. Mune maonero angu, kana iyo iPhone 7 isingasanganise chimwe chinhu chitsva, senge "hey, Siri" yeiyo iPhone 6s, iko kuvandudzwa mukuzvitonga kweinotevera iPhone kuchaonekwa. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » "Yakavimbika" sosi inovimbisa kuti bhatiri reiyo iPhone 7 ichave yakakura kupfuura iyo yeiyo iPhone 6s
Ini handisi kuzonyunyuta kuti kuzvitonga kunowedzera, asi nemusoro wenyaya ndanga ndichitya kuti vachazopenga Mah de increment. Zvakadaro, kurova 2000 kwakapfuura zvandaitarisira asi ini ndichiri kufunga millimeter kana maviri mukobvu aisazotiuraya, uye zvaizopa mukana webhatiri rakakura.
Ngatione zvavanotiudza muKeynote, kuti ndagadzirira pasita yechinomwe, handizive kana ndichanzwa kuda ...
Chaizvoizvo, kana dhizaini yakafanana, uye mapurosesa gore rega roga anonyanya kushanda, nekushandisa zvishoma uye kuita kwakawanda, tinogona kutarisira izvo zvatakatosangana nazvo makore ano: kuzvitonga kuzere, hupenyu hwakareba hwebhatiri uye kuita kuri nani.
Kana bhatiri ikawedzerwa, uye kugona kwacho kuri kukuru… Inhau dzakanaka kwazvo.